I-Spartan Pro Antivirus Mahhala Isikhathi Esilinganiselwe | Ngivela kwa-mac
Futhi sikhuluma ngohlelo esingalulanda ngokuphelele mahhala isikhashana. Lesi sikhathi sizokhuluma nge-Antivirus Spartan Pro, isicelo esivumela ukuthi sithole futhi siqede i-Adware, i-malware kanye namagciwane. Isikhathi esithile manje, kubonakala sengathi inhloso enkulu yabangane babanye i-OS X futhi njengobufakazi balokhu sine-malware amabili okugcina bafinyelele ohlelweni lokusebenza lwe-Mac esandleni seTransmission, uhlelo lokusebenza lokulanda izifufula kwikhompyutha yethu.
Njengoba kunikezwe ubungozi obandayo i-OS X ebhekene nabo, kuvela izinhlelo ezintsha njalo esivumela ukuthi sihlaziye futhi silandele noma yiliphi ifayela esilikopisha noma sililande ku-Mac yethu. Enye yalezo ezisinika izinketho eziningi yi-Antivirus Spartan Pro, uhlelo lokusebenza oluhlola ngaso sonke isikhathi uma kukhona okulandwayo noma amafayela esiwakopayo ungenwe uhlobo oluthile lwe-malware, i-spyware, noma umane nje ube yigciwane.
ISpartan Pro Antivirus isivumela ukuthi sihlole iMac yethu sifuna lolu hlobo lolu hlobo lwesoftware enobungozi engasifaka ekubophweni okukhulu ngaphandle kokugcina singene. Kepha ayisivumeli ukuthi sithole futhi siqede noma yiluphi usongo lwalolu hlobo, kepha futhi isivumela ukuthi siphathe futhi hlola ukuxhumana kwethu kwe-inthanethi ngaso sonke isikhathi efuna noma yini esongelwayo.
Njengokungathi lokho bekunganele, kusinikeza nesiphequluli esivimba noma yiluphi uhlobo lwezikhangiso namawindi avela, lawo mawindi ajabulisayo avula ngokuqhubekayo futhi asikhuthaza njalo ukulanda isoftware egcwele isoftware enobungozi ngaphandle kokungabaza. Futhi isikhathi esilinganiselwe singakwazi landa lolu hlelo lokusebenza oluvame ukuba nentengo yama-euro angu-29,99 ku-Mac App Store.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » I-Spartan Pro Antivirus Mahhala Isikhathi Esilinganiselwe
U-Oscar ortega kusho
Kimi kungamanga, angazanga uhlelo oluzinzile, njenge-OS X. Basebenzisa i-apula.
Phendula u-Oscar Ortega
UGuillermo Lara kusho
Ngemuva kokufaka le antivirus, ngayihlaziya ngama-Malwarebyte ngathola iMalware, ngakho-ke angiyincomi.
Phendula uGuillermo Lara
Akufanele ibe ne-malware njengoba itholakala ku-Mac App Store. Izinhlelo eziningi zalolu hlobo zibamba izimbangi zazo ezifana ne-malware, i-spyware nezinye, kepha hhayi iMac kuphela kepha neWindows.
Isinyamalale esitolo sohlelo lokusebenza. Ngiyilayishe mahhala futhi ngiyizame kaningi ilandelana, ngaphandle kokushintsha noma ukuphequlula futhi isikhathi ngasinye lapho ngithola amafayela athelelekile. manje senginayo 'ekuhlukanisweni' bengilokhu ngisebenzisa i-Virus Barrier Express isikhathi eside ehlanza amafayili we-'pigot' ngezikhathi ezithile? (okunye okubonakala kuholela ekukhangisweni kwe-yahoo)
Izinto zokwenziwa ze-Apple Watch Edition zingahluka minyaka yonke